Xasan Sheikh Maxamuud Oo Ka waramay Xaaladiisa Caafimaad +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xasan Sheikh Maxamuud Oo Ka waramay Xaaladiisa Caafimaad +Cod
Madaxweynaha Dowlada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo la hadalay Idaacada BBC-da ayaa markii ugu horeesay ka warbixiyay safarka uu ku aaday Dalka Jarmalka iyo sida ay hada tahay xaaladiisa caafimaad.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in xaaladiisa caafimaad ay tahay mid heerkeedu sareeyo, waxa uuna intaa raaciyay in dalka Jarmalka uu u aaday in baaritaan caafimaad uu isku sameeyo, waxa uuna intaa ku daray in uusan fursad u helin sadaxdii sano uu xilka hayay in baaritaan caafimaad uu isku sameeyo.
‘’Aniga Caafimaadkeyga waa mid heer sare ah , waxaana Jarmalka hada u joogaa in baaritaan caafimaad aan isku sameeyo maadama aan fursad u helin sadaxdii sano ee lasoo dhaafay, waad ogtahay qofka hadii uu cimrigan gaaro waxa uu u baahan yahay in baaritaano caafimaad isku sameeyo’’ ayuu yiri Madaxweyne Xsan Sheekh.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay intii uu dalka Jarmalka joogay in uu la kulmay Madax katirsan Dowlada Dalkaasi ay ku jiraan xubno ka tirsan Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Jarmalka Angela Markel oo haatan safar dalka uga maqan, waxa uuna sheegay in Masuuliyiintan uu kala hadlay Xaalada Soomaaliya.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in uu dib ugu soo laabto Magaalada Muqdisho marka uu maro baaritaanada caafimaad uu u aaday Dalka Jarmalka, waxaana ,Madaxweynaha mudooyinkii lasoo dhaafay uu ku jira buuq Siyaasadeed.